Breaking Surface (2020) | MM Movie Store
တူဗာနဲ့အီဒါဆိုတဲ့အမတေူအဖကှေဲညီအဈမနှဈယောကျက သူတို့အမနေဲ့အတူ ပငျလယျကွမျးပွငျအောကျ ရငေုပျကွမယျဆိုပွီးစီစဉျထားရာကနေ မိခငျဖွဈသူကနမေကောငျးဖွဈနတေော့ ညီအဈမနှဈယောကျတညျး ရငေုပျဖို့ဖွဈလာတာပေါ့။
ဒီဇငျဘာအခြိနျအခါခမျြးအေးလှတဲ့ရာသီမှာ ကိုယျတှလေိုအိမျမှာပဲ စောငျခွုံပွီးအိပျမနပေဲရငေုပျဖို့လုပျကွတဲ့ ညီအဈမနှဈယောကျဟာ ကံဆိုးစှာနဲ့လနျ့စရာအဖွဈဆိုးကို ငယျဘဝကတညျးကကွုံခဲ့တယျပေါ့။ဒီလိုနဲ့အသကျတှကွေီးလာတဲ့အခါလညျး ရငေုတျတဲ့ဘဝကနေ စှနျ့စားခနျးတှေ . အသကျအန်တရာယျနဲ့မြားလှနျးတဲ့ အလုပျတှမှော သူတို့ဟာ ပြျောနဆေဲပါ။
ဒီကားထဲမှာ မွငျတှရေ့မှာကတော့ ညီအမတှရေဲ့ သံယောဇဥ◌ျ၊ အန်တရာယျကွားကနေ အရှုံးမပေးဘဲ ရဲရငျ့တဲ့စိတျဓါတျ၊ပွတျသားတဲ့ဆုံးဖွတျမှု၊ ဖွဈနတေဲ့အခွအေနမှော အကောငျးဆုံးလမျးကွောငျး ရှေးခယျြလုပျကိုငျမှုတှကေို မွငျတှရေ့မှာလညျးဖွဈပါတယျ။
တူဗာနဲ့အီဒါဆိုတဲ့အမေတူအဖေကွဲညီအစ်မနှစ်ယောက်က သူတို့အမေနဲ့အတူ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်အောက် ရေငုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးစီစဉ်ထားရာကနေ မိခင်ဖြစ်သူကနေမကောင်းဖြစ်နေတော့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်တည်း ရေငုပ်ဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့။
ဒီဇင်ဘာအချိန်အခါချမ်းအေးလှတဲ့ရာသီမှာ ကိုယ်တွေလိုအိမ်မှာပဲ စောင်ခြုံပြီးအိပ်မနေပဲရေငုပ်ဖို့လုပ်ကြတဲ့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ဟာ ကံဆိုးစွာနဲ့လန့်စရာအဖြစ်ဆိုးကို ငယ်ဘဝကတည်းကကြုံခဲ့တယ်ပေါ့။ဒီလိုနဲ့အသက်တွေကြီးလာတဲ့အခါလည်း ရေငုတ်တဲ့ဘဝကနေ စွန့်စားခန်းတွေ . အသက်အန္တရာယ်နဲ့များလွန်းတဲ့ အလုပ်တွေမှာ သူတို့ဟာ ပျော်နေဆဲပါ။
ဒီကားထဲမှာ မြင်တွေ့ရမှာကတော့ ညီအမတွေရဲ့ သံယောဇဥ◌်၊ အန္တရာယ်ကြားကနေ အရှုံးမပေးဘဲ ရဲရင့်တဲ့စိတ်ဓါတ်၊ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်မှု၊ ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာ အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်း ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်မှုတွေကို မြင်တွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။